Amabinzana okuba kunye nabahlobo ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi Online ➡️
Amabinzana amahle aabahlobo
Ixesha lokuvalelisa akukho lula konke konke kwaye nokuba kuncinci ukuba awunawo amagama afanelekileyo. Ke ngoko, ukukunceda, siqulunqe ezona ntetho zintle kakhulu nezinyanisekileyo, eziza kwenza umdlalo ungabi buhlungu kangako.
1 Amabinzana amahle aabahlobo
2 Ndlelantle amabinzana kumhlobo wohambo
3 Ukuvalelisa kumhlobo osebenzayo
4 Iividiyo zamabinzana okuvalelisa kubahlobo
Kude kube lelo xesha, sihlobo sam, umgama uyakusahlula kodwa kwangaxeshanye uzakusenza sisondele kunakuqala.
Ndiza kubala iiyure zokuphinda ndikubone, mhlobo othandekayo.
Ndisakukhumbula njengosuku lokuqala owashiya ngalo.
Onke amaxesha esiwabelana ngawo ahleli engqondweni yam.
Ndingathanda ukubuyela kwiintsuku apho sasihleka kunye.
Ubuhlobo bokwenene boyisa umqobo womgama kwaye ndiyazi ukuba wethu uya kuthi.
Ungumhlobo wam osenyongweni, ngoko ukwazi ukuba awusayi kuba secaleni kwam kuyaphula intliziyo yam.
Intliziyo yam igcwele onke amava ethu kunye kwaye yinto leyo nokuba umgama awunakucima.
Ndikuthwala entliziyweni yam njengomnye wabantu abakhethekileyo ebomini bam.
Akukho mgama ndingenakuhamba ukuba ndibekho ecaleni kwakho, ke ungoyiki, siya kuhlala sikunye.
Namhlanje ndifuna ukukukhumbuza ukuba uya kuhlala ungumhlobo wam osenyongweni.
Nokuba ndingahlangana nabantu abangakanani ebomini bam, akukho mntu uzakuthatha indawo yakho.
Nokuba singahamba ixesha elingakanani singabonani, mhlobo wam osenyongweni, uya kuhlala ukhethekile kum.
Ndingalilibala njani ixesha elininzi kangaka lokuphambana esabelana ngalo kunye?
Ifowuni yam iya kuhlala ilinde umnxeba osuka kuwe ukwazi ukuba unjani.
Nokuba ukude, mhlobo wam othandekayo, intliziyo yam iyaphuphuma luvuyo ngempumelelo yakho.
Oko wemkayo, khange ndikwazi ukufumana umhlobo oxhomekeke kuwe.
Mfondini, ngaphandle kobuhlobo bakho andinanto ishiyekileyo.
Ndandingenangqondo ngokucinga ukuba siza kuhlala singabahlobo kwaye namhlanje singacingi ukuba undivalelisa.
Nokuba ukude, mhlobo othandekayo, khumbula ukuba ndiyakuthanda.
Awunguye umhlobo wam kuphela, kodwa ukwanguye nomntakwethu, iqabane lam leziselo kunye namava, kwaye yinto leyo nokuba umgama awunakutshintsha.
Ndiyazi ukuba awufezekanga, kodwa kobu bomi andizukuba nawo omnye umhlobo onjengawe.
Ungomnye wabo bantu bambalwa esingafuni kubayeka, kwaye nangona ilixesha lam lokuthi ndlela-ntle namhlanje, nokuba kwenzeka ntoni, uya kuhlala ungumhlobo wam osenyongweni.
Ndlelantle amabinzana kumhlobo wohambo
Mhlobo wam othandekayo, nokuba ndingaya, ungathandabuzi ukuba uyakuhlala ukho entliziyweni yam.
Amathuba esiye sabelana ngawo agcinwe kwisutikheyisi zam.
Yayingengobuyatha ukukholelwa ukuba siyakuhlala sikunye, kuba nokuba kungafuneka uhambe namhlanje, ndiyazi ukuba ubuhlobo bethu buza komelela ngaphezu komgama.
Nangona besihlala sisilwa, akukho mhlobo ubhetele kunawe.
Soloko umhlobo wam othandekayo, nokuba kukude siya kulwa el mundo kunye namaza.
Enkosi ngokuba yinxalenye yobomi bam kwaye uyonwabise ngeziganeko ezininzi, ndiya kuhlala ndikuthwala entliziyweni yam nokuba ukude kangakanani.
Sihlobo, ndiza kuwakhumbula amazwi akho neengcebiso zakho zobulumko.
Apho ndiya khona ndiyazi ukuba ndiza kufumana abantu abalungileyo, kodwa akukho mntu uya kuba okhethekileyo njengawe.
Nokuba asibonani njengakuqala, uya kuhlala unendawo ekhethekileyo entliziyweni yam.
Ukuhleka kunye yinto endiya kuyikhumbula ngonaphakade.
Nangona singasahambi kunye, injongo iyafana, ukufezekisa ulonwabo. Ndiza kubona kumgca wokugqibela.
Ndingalibala njani xa sasihlala sihleka de silile?
Nangona ndingasakuboni kangako, ukwazi ukuba ulungile kundonwabisa kakhulu.
Iimpawu zakho ezintle ziya kuhlala zikwenza ube ngumntu okhethekileyo kum.
Sihlobo, zonke iinkumbulo ezintle esizenzileyo kunye ziya kundonwabisa ngonaphakade.
Mfondini, nokuba ndingathi ndlela-ntle namhlanje, ungathandabuzi ukuba ndiyakukhumbula kuwo onke amava amnandi obomi bam.
Elona xesha lonwabisayo nelimnandi ebomini bam ndilichitha nawe. Ndingakuphoswa njani?
Nangona singekhe sibonane yonke imihla, andisoze ndibekho ebomini bakho.
Andikwazi ukuvalelisa kuwe, ndinokubulela kuphela ngokuzisa izinto ezintle ebomini bam.
Nokuba ndingathi ndlela-ntle kuwe namhlanje, andinakuze ndikulibale kuba akukho mntu uzakuthatha indawo eyeyakho entliziyweni yam.
Namhlanje sifaka iinkalo ezintsha zobomi bethu kwaye nangona ndingasoloko ndikubhalela, ndiyathembisa ukuba soze ndikushiye
Sisonke sifezekise izinto ezininzi, ke ukude ndiza kubhiyozela impumelelo yakho kuba ulonwabo lwam lolwam.
Ukuvalelisa kumhlobo osebenzayo
"Abantu abanomoya wokulwa abaze bancame kwaye bangaze balahlekelwe ngumdla wabo ngento abayenzayo."
"Lowo angawuthandi umsebenzi wakhe, nokuba uyasebenza imini yonke, akaphangeli." UFacundo Cabral.
"Sonke singathanda ukufeza amaphupha ethu, kodwa ngenxa yoku kufuneka sisebenze nzima kwaye sizame ukwenza konke okusemandleni ethu."
"Lowo ufuna ukwenza into ufumana indlela, lowo ungafuni kwenza nto ufumana isizathu."
"Xa sibonisa umdla koogxa bethu kwaye sibanceda nangayiphi na indlela esinokuthi ngayo, sidibana nabo sisondele kakhulu kwaye ke sisebenza kamnandi kakhulu."
"Owona msebenzi unzima uba lula xa wonke umntu esebenzisana ngokulinganayo, ngegalelo lomntu ngamnye kuthi siza kuziphumeza iinjongo."
"Kufuneka siqale kule veki ngenzondelelo enkulu kunye nethemba kwaye siqhubeke ngoluhlobo kude kube impelaveki ukuze sikwazi ukufikelela ngaphezulu kunokuba besilindele."
"Umsebenzi onemveliso kakhulu ngulo uphuma ezandleni zomntu owonwabileyo." UVictor Pauchet.
"Kukho iintsuku apho izinto zingahambi ngendlela ofuna ngayo, kodwa asikwazi ukuyeka, kuba yonke imihla sinokuzityhala kwaye senze konke okusemandleni ethu ukuphucula nokudlula iinjongo zethu."
“Sisenokungabi nawo owona msebenzi ubalaseleyo emhlabeni, kodwa siyawunandipha xa sikunye. Masiyenze iphumelele iveki yomsebenzi kuthi sonke. "
Iividiyo zamabinzana okuvalelisa kubahlobo
Iziqendu zokunqwenela usuku oluhle kumntu okhethekileyo
Enkosi ngokuba secaleni kwam